Gaadiid aan rasaas karin oo la siiyey dowladda Somalia – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Gaadiid aan rasaas karin oo la siiyey dowladda Somalia
Muqdisho – Mareeg.com: Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa maanta dowladda federaalka Soomaaliya siisay 11 gaari oo ah nuuca aan xabaddu Karin.
Munaasibad lagu qabtay safaaradda dowladda Imaaradka carabtu ku leedahay Muqdisho ayaa dajiraha dalkaas u fadhiya Soomaaliya, Maxamed Axmed Al-othman wuxuu 11 gaari oo ah nuuca aan rasaastu Karin ku wareejiyey agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya, Taabid Maxamed.
Dajiraha dowladda Isutagga Imaaraadka Carabta Maxamed Axmed Al-Cusmaan ayaa munaasibadda ka sheegay in gaadiidkan ah nooca aan xabadda karin in uu qeyb ka yahay taageerada joogtada ah ee ay siiyaan shacabka iyo dowladda Soomaaliyeed.
Danjire Al-othman ayaa sidoo kale sheegay in Imaaraadka Carabtu ka caawinayaan Soomaaliya dhinacyada waxbarashada, caafmaadka iyo waxyaabo kale oo muhiim ah.
Danjiraha ayaa xusay in bisha Ramadaan ee nagu soo fool leh ay doladda Imaaradka Carabtu bixin doonto kaalmooyin loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed ee saboolka ah.
Agaasimaha Madaxtooyada Soomaaliya, Taabid Maxamed, oo wakiil ka ahaa dowladda Federaalka Soomaaliya, ayaa ka mahadceliyey gaadiidkan muhiimka ah ee ay dowladda Isutagga Imaaraadka Carabtu ugu deeqday Soomaaliya.
Taabid Maxamed ayaa sheegay in xiriirka labada dowladood oo ah mid ballaaran ay keentay in kaalmo dhinac walba ay bixiso dowladdan, isla markaana ay ka rajeynayaan in ay intaan ka sii xoogeysan doonto taageerada dalka Isutagga Imaaraadka Carabtu siinayo Soomaaliya.
Ma ahan markii ugu horreysay ee dowladda Imaaradka Carabtu gaadiid siiso dowladda Soomaaliya ee waxey horay gaadiid u siisay ciidamada nabadsugidda iyadoo sidoo kalana dalkeeda kusoo tababartay qaar ka mid ah ilaalada gaarka ah ee madaxtooyada.